Kedu ihe kpatara na ekweisi m anaghị ada ụda ọzọ? - Ajụjụ
Isi > Ajụjụ > Igweisi ekweghị na mberede - otu esi ekpebi
Igweisi ekweghị na mberede - otu esi ekpebi
Kedu ihe kpatara na ekweisi m anaghị ada ụda ọzọ?
Gbanwee Mwube playback
Otu n'imeiheọtụtụ ihe ndị mmadụ na-ajụkarị, 'Gịnị kpatara yaekweisi m n’olu dara ụdaezu? ' bụ n'ihi nhazi dị mfe nke na-emegheiheoke olu. Iji mee ka ihe dị mfe, ka anyị kpuchie otu esi edozi nke a na Apple naGam akporoekwentị. ... Buru ụzọ, banye na ntọala gị wee họrọ> Soda> Mpịakọta.Bọchị 8 2021
Nabata azụ na edemede nke taa, anyị ga-elele ọtụtụ usoro iji melite ụda olu nke ekweisi anyị, ị nwere ike iji usoro ndị a na ndị ọkà okwu na ngwaọrụ mmepụta ụda ndị ọzọ. Ugbu a ọ nweghị nke ga - enwe ike ịbawanye ogo ya, agbanyeghị na enwere olile anya na ha na - eme ọdịiche pụtara ìhè, hapụ ihe dị ka ma egbula oge ịdenye aha maka ndụmọdụ ndị ọzọ ma ọ bụrụ na edemede ahụ na - enyere aka ịbata isiokwu anyị ga - amalite site na ịlele na anyị melite ekweisi anyị ma ọ bụ ekweisi anyị nke ọma mgbe ị kwenyesiri ike na nke gị guzobere n'ụzọ ha kwesịrị ịdị, nweere onwe gị ịga obere iji wụtuo n'ụzọ ziri ezi iji melite ogo nyocha nke mbụ gaa isi peeji ntọala site na ịpị akara ngosi gia na menu mmalite wee gaa ntọala Gaa na sistemụ wee họrọ ụda site na nhọrọ dị n'akụkụ aka ekpe Pịa Pịa njikọ njikọ Njikọ Bluesound n'akụkụ aka nri nke ibe ahụ, mgbe windo ọhụrụ ahụ meghere, mee ijide n'aka na ị nọ na taabụ Na-ahụgharị wee chọta ekweisi gị na ndepụta ahụ, pịa na ekweisi gị, wee họrọ Tọọ ndabara Ọ bụrụ na ị hụghị ekweisi gị na ndepụta ahụ wee pịa nri na nhọrọ wee họrọ Gosi Ngwaọrụ na Disabled , ị ga-ahụ ya n ow, ma ọ bụrụ na ị hụghị ekweisi gị na ndepụta ahụ wee pịa ugbu a Kaadị na edemede nke m na-egosi gị otu esi edozi ekweisi anaghị arụ ọrụ na Windows 10. Hapụ windo a maka ugbu a ka anyị ga-abịaghachi na ya a obere oge.
Ọzọ, anyị ga-agba ọsọ nsogbu nke ọdịyo maka nsogbu ọ bụla doro anya nke nwere ike ime ka ekweisi gị daa ụda ma ọ bụ ghara ịrụ ọrụ nke ọma, gaa na peeji nke Ntọala ọzọ mana oge a họrọ Mmelite na Nche wee họrọ Nchọpụta nsogbu nhọrọ ndị dị na ekpe. Chọta nhọrọ ọkpụkpọ ọdịyo na ndepụta ahụ wee pịa ya wee họrọ Run Troubleshoot Họrọ ngwaọrụ gị ma nye Windows ohere ịchọọ nsogbu na akpaghị aka ma ọ bụrụ na ọ chọta nsogbu na ya, hapụ Windows idozi ya mana enweghị ike idozi ya n'onwe gị, wee chọọ online maka azịza a kapịrị ọnụ maka nsogbu a. Ka anyị ugbu a gaba na ohere nke melite ụda nke ekweisi anyị.
Ihe mbụ ị ga-anwale bụ ịbawanye ọnọdụ dị mma na njikwa ụda, ọ bụrụ na ị gbanwebeghị nke a, ohere nwere ike ịbụ na anyị nwere ike melite ogo ya na ngbanwe dị mfe na ntọala iji lelee ma laghachi na windo anyị meghere I mechiri usoro iji nweta ya n'ebe ahụ bụ Ntọala, mgbe ahụ sistemụ, wee ụda na mgbe ahụ Ogwe njikwa njikwa ụda na taabụ ọkpụkpọ ugboro abụọ pịa ekweisi gị wee gaa Advanced tab. N'ebe a, ị ga-ahụ igbe ndọda nke na-enye gị ohere ịgbanwe ogo ahụ, ọ dị nwute ma ọ bụrụ na ọ na-achacha achacha mgbe ahụ ị nwere ike ọ gaghị enwe ike idezi ya. Nwere ike ịnwale iji ọdụ ụgbọ mmiri dị iche na PC gị.
Ọ bụrụ otu a, họrọ nhọrọ nke nwere nọmba Hertz kachasị elu maka ohere kachasị mma nke kacha mma ma hụ na pịa Mee. Hapụ windo a ka ọ mepee ọzọ maka usoro ọzọ Usoro ọzọ bụ ịgbanwe ụfọdụ ntọala ndị ọzọ na akụrụngwa ngwaọrụ wee gbanye windo anyị ga-eji gbanwee ogo Nke a nwere ike ịbụ nhọrọ onwe gị mana enwere nhọrọ ole na ole Nke mbụ enwere ike ịchọta nhọrọ n'ime 'Mmelite' na igbe ị kwesịrị ịhụ ma ọ dịkarịa ala nhọrọ ole na ole iji gbanwee ya na ị nwere ike ịkwalite Bass Boost site na ịlele igbe ahụ n'aka ekpe ya na gburugburu Iji gbanwee ntọala nke ọ bụla n'ime nhọrọ ndị a, pịa ya otu oge wee họrọ Ntọala, dị ka Isi agbam ume. M nwere ike ịgbanwe otú ọ amplifies ọ pụrụ melite ụda àgwà n'ihi na ị, na-enye ya a na-agbalị na-echeta na iti see ozugbo ị na-enwe obi ụtọ na mgbanwe.
Ka anyị gaa na usoro ọzọ ma ọ bara uru ịhapụ windo a maka nke a Usoro ọzọ iji meziwanye ụda dị mma bụ ịgbanwe ntọala nhazi ngwaọrụ gị, usoro a ga-eji dabere na ụdị ngwaọrụ na ọdụ ụgbọ mmiri ọ na-eji ọ ga-ejikọrọ na yourpci-egosi gị ụzọ atọ dị iche iche i nwere ike ime nke a. Nhọrọ mbụ bụ ịlaghachi na Sound panel ma laghachi na 'Extensions' nke ngwa nrụpụta gị na igbe anyị ji mee ihe na mbụ, chọọ Nhazi ma pịa ya otu oge ugbu a ị ga-ahụ bọtịnụ ahụ na akara atọ na ya na-aga n'ihu ruo mgbe i nwere afọ ojuju na ụda àgwà site na-agbanwe nanị otu nke sliders i nwere ike ịgwa ndị dị iche na ụda na nke a bụ ihe niile onye mmasị ụzọ nke abụọ iji bugote ndị nhazi ụda mgbanwe ndị a sliders ebe a ma ọ bụ họrọ otu n'ime presets Gbalịa nke a mgbe ịchọtara obere akụ dị n’aka nri nke traktị sistemụ wee pịa ya Ọ nwere ike igosi akara ngosi dị ka ọkà okwu a na-akpọ ya ihe dịka Realtek HD Audio Manager Equalize Settings na ụzọ abụọ gara aga, nke atọ changingzọ na-agbanwe ha bụ ibudata ngwanrọ na-enye gị ohere ịme nke a. Hapụ njikọ na ngwanrọ ọ bụla nwere ike ime nke a na nkọwa ahụ.
Soro ntuziaka na weebụsaịtị iji wụnye ma melite ya. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla biko mee ka m mara, anyị ga-ahụ ugbu a na anyị nwere ndị ọkwọ ụgbọala kachasị ọhụrụ maka ekweisi anyị, ụzọ mbụ iji lelee bụ ịga Ngwaọrụ Ngwaọrụ, ị nwere ike ịga ebe ahụ site na ịchọ ya na njikwa Ngwaọrụ Gaa nhọrọ a na-akpọ Ntinye Ntinye na Ọpụpụ wee pịa akụ iji gbasaa ya, chọta ekweisi gị na ndepụta ahụ wee pịa ya ugboro abụọ iji mepe windo ọhụrụ a na-akpọ taabụ ọkwọ ụgbọala wee chọta ebe ọ na-ekwu Mmelite Ọkwọ ụgbọala wee pịa ya, họrọ nhọrọ akpaaka wee hapụ Windows ka lelee maka mmelite ọkwọ ụgbọala, ọ bụrụ na ọ nwere nke ọ bụla, a ga-arụnyere ya na akpaghị aka Ọ bụrụ na Windows enweghị ike ịchọta mmelite ọ bụla, lelee maka mmelite ọkwọ ụgbọala na weebụsaịtị onye nrụpụta, enwere peeji nke ndị ọkwọ ụgbọala na ị ga-achọ ịma aha nlereanya ma ọ bụ nọmba nke ngwa ọdịyo gị. Ibudata ma wụnye ọkwọ ụgbọala kachasị ọhụrụ site na ebe ahụ, mana hụ na ị nwetara ya na weebụsaịtị webụsaịtị.
Ọ dị mma ịmara na ọ bụrụ na ị na-eji ngwa ma ọ bụ egwuregwu, ị ga-enwe ike melite ogo ọdịyo na ngwa ị na-eji. Dịka ọmụmaatụ, lelee ntọala ọdịyo iji hụ ma ị nwere ike ịgbanwe ha iji melite ụda ọdịyo, ọ bụrụ na ekweisi gị dị jụụ ma ịchọrọ ịgbanye ha enwere m isiokwu zuru oke iji nyere gị aka na ngwanrọ nke na-abawanye olu nwekwara ike-eji dị ka ihe nhazi ụda dị ka m kwuru na mbụ ugbu a pịa na kaadị Cardon ka ị gaa n'isiokwu a nke m na-egosi gị otu esi etinye ma melite ngwanrọ a. Ọ bụ kpam kpam n'efu ma mee mgbanwe niile na ọ bụrụ na nje ma ọ bụ ụdị ochie nke Windows na-akpata nsogbu, ị ga-anwale ihe dịka nyocha maka nje virus na imelite Windows na ụdị kachasị ọhụrụ.
Ihe ngwọta ọzọ dị ngwa ngwa ga-abụ ịgbanwe ọdụ ụgbọ mmiri. Dịka ọmụmaatụ, ị na-eji ọdụ ụgbọ mmiri dị n'azụ PC gị n'ihi na nke a nwere ike melite ogo mgbe ị nwere Wi-Fi. jiri ekweisi Reless dị ka ekweisi bluyo gbalịa ịbịaru nso na onye nnata iji hụ ma ọ bụrụ na ọ dị iche mgbe ọ na-anwa ịtinye onye nata n'ime ọdụ ụgbọ mmiri dị iche, dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe nkwụnye USB iji mee ka ọ bịaruo gị nso wepu ngwaọrụ ọ bụla nke ahụ nwere ike igbochi njikọ Bluetooth maka ụda kacha mma ndị a bụ usoro m iji nwalee ma melite ogo nke ekweisi gị na windo 10 n'efu.
Enwere m olileanya na isiokwu ahụ nwere ike inye aka. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla biko mee ka m mara na ihe m ga - eme ma m gbalịa ịza ozugbo m kụrụ kaadi kaadị iji lee otu edemede nke m na - egosi gị ụzọ 10 dị mfe esi eji Windows 10 -PC gị nwere ike ịme ngwa ngwa ma ọ bụ nọ nso ịhụ ụfọdụ n'ime isiokwu m ndị ọzọ nwere ike ịmasị gị Ọ bụrụ na ịchọta isiokwu taa na-enye aka, gbaa mbọ hapụ otu Like ma denye aha ọtụtụ maka ndụmọdụ ndị ọzọ maka ọdịnihu Daalụ maka ikiri na m ga-ahụ gị n'isiokwu ọzọ
kb2919355 agaghị awụnye
Kedu ka esi edozi ụda dị ala na ekweisi?
Naudasite n'otu akụkụ (aka ekpe ma ọ bụ aka nri) nke wiredekweisidị nnọọdị ala
Gbaa mbọ hụ naekweisina-agbanye aka na yaekweisijaak nke ihe eji eme ya. ...
Tọọ ngwaọrụ gịolun'ọkwa dị elu, ma ọ bụrụ na gịekweisinwee nkewaolujikwaa, megharia ya na ọkwa ighoro achọrọ.
Ndi ekweisi na-adị jụụ karịa oge?
O kwere omume maka ụda dị mma nkeekweisiigbadaoge n'aga. Na-ntịekweisinwere ikeibuplugged na ntị waks. Atụmatụ ụfụfụ eji eme ihe n'ime ụfọdụ n'ime ntị nwere ike isi ike na nká, na-eme ka ha ghara ikpuchi ya. Nke a na-ebelata ikike nkeekweisiigbochi ụda n'èzí, ọ na-emetụta ụda dị mma.
- Legharịa anya n’obodo, ị ga - ahụkwa ekweisi. Onye ọ bụla na-eyi ha, ọ na-abụkarị ọtụtụ awa. Ndi nne anyi nile duru anyi aka na nti ka anyi ghara ige nti na nti.
Mana kedu ihe dị njọ ọ bụ maka anyị niile ịnụ? Ego ole ka m ga-eche maka ntị m? Yabụ n'ezie na ndị nne anyị ziri ezi, ebe egwu na-ada ụda na-emebi ntị gị, ikekwe ị gaghị ahụ mmetụta ọ bụla pụtara ìhè ruo mgbe oge gafere. N'ezie, mkpọtụ ọ bụla na-aga n'ihu na-emetụta ntị gị - Igweisi nwere ike ime ka ntị ghara ịnụ? Kpamkpam - Nke a bụ Dr. Samantha Anne, ọkachamara ENT ọkachamara na pediatrics.
Yabụ ọ bụrụ n'ịkpọ egwu ma ọ bụ ọbụla pọdkastị ụbọchị niile, ị na-etinye ntị gị n'ihe egwu. Nweghi ike idozi nsogbu ịnụ ntị - ozugbo ịkwụsị ịnụ ntị site na ikpughe na mkpọtụ, enweghị ịlaghachi. Nweghị ike idozi ya, enweghị ịlaghachi azụ - akpọrọ m Dr.
John Oghalai, onye ENT na Onye isi oche na USC, iji mụtakwuo banyere otu anyị niile si emebi ntị anyị. Na ntị, ị nwere ike imebi akwara. Na akwara nke na-eburu ụda site na cell ntutu na ụbụrụ.
Ọ bụrụ na ịnụrụ ụda nke na-ada oke ụda, ha na-anwụ ma, dịka anyị maara, adịghị agbanwe agbanwe - ị nwere ike ị gaghị achọpụta na ị na-emebi ntị gị n'ihi na ọ na-adịkarị nwayọ na aghụghọ. Ndị dọkịta na-atụkarị aro ịnwale ịnwale iji nweta akara ngosi, mana ejiri m n'aka na ịnweghị ule nyocha na-adịbeghị anya, enweghị m. Naanị ihe ịrịba ama doro anya nke mmebi bụ mgbe ị na-ada ụda na ntị gị, nke a makwaara dịka tinnitus.
Nke a abụghị ihe dị mma n ’ihi na ọ pụtara na ntị gị mebiri emebi. Na mgbakwunye, mgbanaka ahụ doro anya na ọ na-ewe iwe. Ọ dị mma na anyị na-egbu nwa anyị ntị ntị ma ọ nwere ike imebi akwara ozi anyị, ọ dị mma.
Ma ọ̀ bụcha ihe ọjọọ dịịrị anyị? Nke ahụ agaghị ekwe omume, ọ nwere ike? - Ọ bụrụ n ’ịnụ ụda dara ụda nke ukwuu, oge ịnwere ike ịnụ dị mkpumkpu ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụ ụda ọkara mgbe ahụ ị nwere ike ị cana ntị na ya ogologo oge Ndị ọrụ gọọmentị nwere ụfọdụ ntụpọ ntụpọ decibel. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịnụ ihe na decibel 85, ị nwere ike ịme ya n'enweghị nsogbu ruo awa asatọ. Ọ dị ka ige ntị na mkpofu ahịhịa, blender, ma ọ bụ efere efere ruo awa asatọ, ọ bụghị nke ọjọọ anụ naanị awa anọ dị mma.
Nke a dị ntakịrị karịa ọgba tum tum dị mita asaa. Were ya na ọ bụ obi ọjọọ ruo awa anọ. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị chọghị ịnụ chainsaw nwere ike ịdaba decibel 120.
Ugbu a ka m ghọtara na ọtụtụ n'ime anyị anaghị eche echiche ọkwa decibel. Ọ na-amasị m mgbe ị mere nke ahụ, mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata, enwere ngwa iji tụọ nrịba ọkwa decibel gị, ọ bụ ezie na e nwere ụzọ ndị ọzọ iji tụọ nrịbama decibel gị nke na-adịchaghị adị - ụkpụrụ nduzi niile na-arapara na nke ahụ. Ọkwa. Ekwesighi inu gburugburu gi.
Ma mgbe ahụ ọ bụrụ na ị bulie ya ma ịnụrụ ụda na-ada ụda ma ọ bụ na ọ dị ntakịrị ụda, dị ka mgbe ị si na nnukwu egwu pụta, dịka ọmụmaatụ, na ị nwere obere ụda ahụ ma kpuchie ya obere oge, nke ahụ bụ n'ezie mmebi nke ịnụ ihe. - N’ezie, ekweisi anyị nwekwara ike ịkpata nsogbu a. Mkpọpu mkpọtụ, ebe ekweisi anyị na-egbochi mkpọtụ ihu igwe n'ihi akara ha mepụtara, nwere ike inye aka belata mkpa maka egwu na-ada ụda.
Hotmail search akụkọ ihe mere eme
Nkagbu mkpọtụ, nke na-arụ ọrụ na kọmputa site na mkpọtụ na mpụga, nwere ike inye aka. Ha abụọ ejikọtara ọnụ nwere ike ime nnukwu ọdịiche - Mgbe ejiri ya rụọ ọrụ nke ọma, mkpọtụ na-akagbu ekweisi abụghị ihe ọjọọ maka iweda decibel ị na-egwu, ha nwere ike inye aka - Dọkịta Oghalai na-ekwu na ntị ntị ochie na-adịkarị nwere ike bụrụ nke kachasị njọ dịka Dr. Anne. - eardị ntị ntị nke na-anọdụ ala na auricle nke ị ka nwere ike ịnụ site n'èzí mkpọtụ bụ ụfọdụ n'ime ihe kachasị njọ ị nwere ike ịnwe n'uche m - Ha abụọ kwenyere na ịkagbu mkpọtụ nwere ike inyere aka, n'agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-eji nkagbu mkpọtụ dị ka mgbaghara iji gbochie ihe niile wee gbanwee egwu gị, emela nke ahụ.
Nke ahụ dị njọ n’ezie. Odi mma m choro ihu otu m si anu n’onu o music. N’ihi ya, anyị banyere n’ụwa ka anyị hụ otú New York City si ada ụda n’ezie.
Anyị jiri mita ọkwa ụda wee tụọ olu dị na mpụga wee hụ otu m ga-esi gbanwee olu m na iPhone. Anyị nwalere di na nwunye ntị, nkwụsị mkpọtụ, mwepu mkpọtụ, airpods, mkpọtụ ịkagbu ntị na ntị ntị. Na mpụga obodo ọ na-eme mkpọtụ dị ka a ga-asị na enweghị ụzọ ụgbọ oloko na ọdụ ndị ahụ, mana oge ụfọdụ ọ na-adawanye ụda mgbe ụgbọ ihe mberede na-ebufe.
N’ọfịs, egwu m na-adịkarị jụụ. Mana ekweisi niile na-agbaso usoro ojiji doro anya, n'agbanyeghị ebe m nọ. Ekwesiri m idebe ekweisi m mgbe niile na Airpods m n'ọkwa kacha elu.
Mkpọtụ na-ekewa ekweisi na mkpọtụ na-akagbu ekweisi mere ezigbo ọrụ nke igbochi mkpọtụ mpụga, nke dugara m ime ka olu dị ala karịa ndị ọzọ. Ma ọbụlagodi na ekweisi-ịkagbu na mkpọtụ na-ekewapụ ntị, ụda ọdụ ụgbọ oloko ji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ dị ka omume ahụ dọrọ aka ná ntị na anyị nwere ike ịgabiga ya n'ụzọ dị mfe, karịchaa ma ọ bụrụ na ekweisi nwere ike igbochi mkpọtụ. Ihe niile anyị nwere ike ime iji lekọta ntị anyị bụ ichebara echiche.
enyere emeghe gl
Eleghi anya hapụ ihe efu gị ma yikwasị ụda ntị gị na egwu n'ihi na ọ dịghị mgbe ịchọrọ ịnụ ụda ahụ. Ọ bụrụ na ị bụ nne na nna, ị nwere ike ịhazigharị olu maka ụmụaka gị ka ha ghara ị gafere ọkwa ọkwa decibel ọ bụla - ọ dị mma iji ekweisi ma bụrụ naanị onye maara ihe, nwee ezi uche - Dr Oghalai kwenyere na ọdịnihu nwere ike ịdị mma bya abụru iya nụ. Teknụzụ isi igwe ka mma nwere ike belata mmebi anyị na-eme. - Ọ na - akawanye mma dịka ndụ anyị na - aga, n’ihi na echere m na ekweisi enwetawo nke ọma. - Ọ bụrụ na o nwere olile anya mgbe ahụ Ọzọkwa, I.
Chei, you nwetụla mgbe ị na-eche banyere nkà na ụzụ na akụkọ ifo? Hapụ ha n'okwu ndị dị n'okpuru ebe a ka anyị na-ele anya mgbe niile maka echiche, gbakwunyere na anyị amalitela ọhụụ YouTube ọhụụ ọhụụ nke ị ga-enyocha ga-apụ ka ị mee nke a.
Kedu ihe kpatara ụda dị na ekweisi m ji dị jụụ?
N'ihe banyere njikọta adịghị ike, ụda olu nwere ike belata mgbe ụfọdụ, na-eduga na ụda na ogo adịghị mma. N’ihi nke a, ọ na-adị gị ka ekweisi gị daa jụụ. N'oge ụfọdụ, ị nwere ike ịchọpụta na ọbụlagodi olu kachasị na ngwaọrụ gị anaghị enye gị otu ụda olu dịka ọ na-emekarị.
Kedu ihe mere nti nti m ji egbutu oge nwa oge?
Ajụjụ New Jib Ezi earbuds na-amalite ịcha mgbe obere oge na ekweisi mode. Ajụjụ Ọ ga - eme ka ekweisi igwe IPhone gbue na eriri ụdọ Jack 3.5? Ajuju ekweisi ekweisi snagged na tebụl, ugbu a ụda na-agbagọ. Edozi! Achọrọ m maka ekweisi Ajụjụ m na-anụ naanị site n'otu akụkụ nke ekweisi na pc.
Gịnị mere ekweisi Bluetooth m ji akwụsị na mberede ịrụ ọrụ?
Suddenlyda kwụsịrị na-arụ ọrụ n'akụkụ aka ekpe nke ekweisi Bluetooth m. Playsda na-akpọ site n'aka nri naanị.
Kedu ihe kpatara EarPod m ji nọrọ jụụ na mberede?
M nwalere nke a site na iji mpempe ntị m ndị ọzọ (ntị aka ekpe a gbajiri), ma ụda olu siri ike karịa. Gini mere nti nti m ji juu aju ugbu a? Ha agbajiri ma ọ bụ enwere ụzọ idozi ya? Nke ahụ dị ka okwu ochie nke earbuds nkwarụ. Nke ahụ dị ka okwu ochie nke earbuds nkwarụ.